Oromoo fi waraana Tophiyaan gaggeessaa turte – Dhimma hidhaa Abbayyaa waliin yoo laalamu – Awash Times
Oromoo fi waraana Tophiyaan gaggeessaa turte – Dhimma hidhaa Abbayyaa waliin yoo laalamu
March 8, 2020 Malka Wabe Uncategorized Leave a comment
Namni biyya qabu biyya ofiitinn dhaadata. Biyya ofii itti guddatee, itti horee, itti baratee, ilma itti guddifatee biyya ofii dabarsee itti kenna. Gaafa biyyi tuqamte akka kanniisa gaagurri jalaa tuqamee walbira ka’ee lolatee biyya ofii diina alaa irraa tiksa.
Oromoon Minilkiif gareen isaa biyya Tophiyaa tana yoo qabatan sossobanii waliin biyya tana bulchinaa jedhanii kan akka Goobanaa Daaccee ofitti qabanii lolchiifatanii gaafa biyyattii dhuunfatan ajjeesan. Namoonni ciccimoon akka Qusee Diinagdee (F. Habta Giyoorgis) faanti tajaajilaaf mala baasaa ta’aniif. Minilik gaafa dhimma irraa fixatu karaarraa maqsaa ture.
Tophiyaan waraana gaggeessite kan akka Maycawa fi Xaaliyaanii lola akka Aadawaa faaratti gootonni akka Gabayyoo Gurmuu, Baalchaa Abbaa Nabsoo biyya Tophiyaa irraa Xaaliyaanii qolan. San boodas bara Xaaliyaanin deebitee dhufte Hayla Sillaasen biyya gatee baqate gootonni Oromoo kan akka Balaay Zallaqaa Qilxuu, Abdiisaa Aagaa kkf biyyattii tanaaf wareegama cimaa baasanii gaafa biyyi nagaa taatu Hayila Sillaasen deebi’ee isaan ari’e. Kaanis ajjeese.
Oromoo gootummaa isaa gaafa rakkoo ittiin oolanii san booda akka qodaa cabaa gatan ykn ni ajjeessaa turan.
Bara Darguutis seenaa lola Somaalee waliin ta’erratti gootummaa guddaadhan namni injifannoo guddaa galmeessan kan akka Alii Barkee galanni isaanii hidhaa ture. Wayyaanen waggaa sagal hiitee gaafa achii bahu bakka itti goru dhabee Laga Xaafotitti dhakaa yoo baatu warri kuun garuu abbaa biyyaa, abbaa fooqii ta’ee jiraata. Darguun janaraalota Oromoo gootummaan beekaman hedduu lolchiifatee gaafa dhimma irraa fixatu ajjeesaa ture. Kana malees dargaggoonnii Oromoo dirqidhan (Biherawi wutidirinnaa) jedhanii qabanii dirree waraanaa geessanii leenjii gahaa malee fixaa turan. Oromoodhaf garuu galanni salphinaaf xiqqeeffamuu ture. Oromoon kan barbaadamu gaafa lolaa qofa, lolli yoo xumurame karaarraa maqsan.
Bara Wayyaanee uummata mootummaan Oromoo diina godhatee waraana itti labse. Sababa ABO deeggartan jedhamuun hidhuu, ajjeesuf biyyaa baasun akka seeratti fudhatame. DHDUO bara sanii aangoo ofii dabalachuuf Oromoo hedduu hiisisuuf ajjeesisuun akka ulaagaa laalama ture. Biyya san keessatti Oromoon akka diinaa osoo laalamuu garuu gaafa lola Baadimmee Oromoon lolaaf barbaadame. Ilmaan Oromoo dirqanii, kaan maallaqaan sossobanii mindaa guddaa argattu jedhanii gara lola Baadimmee geessan. Akka warri achi ture himutti lubbuu namaa Baadimmeetti dhume gara kuma 70 himamu san keessaa harki caalaf kan lola hamaatti ergame Oromoota. Oromoota dhuman kana du’a isaanitillee sirnaan warratti hinhimne. Lolli suni gaafa xumuramu ijoollee lubbuudhan hafte waraana keessaa ari’an. Hojii dhabdoota ta’anii karaarratti kufan.
Seenaa Toophiyaan waraana alaaf keessatti gaggeessitetti Oromoon akka baattuu meeshaa, kan diinaf lolee seenaf galatallee itti dhabu qofa osoo hintaane kan itti salphatu ta’aa ture.
Egaa ammas seenan gangalatee dhufe. Tophiyaan dhimma hidhaa Laga Mormor (Abbayyaa) waliin walqabatee Masrii waliin waldhabdee dhufuuf Oromoo karanumaa kakaafachaa jirti. Akkuma baratame meeshaa waraanaa baachisanii biyya Oromi irraa fayyadamuuf akka du’uuf isa kakaasaa jiru.
Suuran asii Olii kuni jalqaba Abdiisaa Aagati, itti aanee Ali Barkee bara lolaatif kan dhumaa Alii Barkee yeroo ammaati.
Haata’u malee garuu Tophiyaa keessatti Oromoon ammas akkuma salphate, hidhamaa, ajjeefamaa jira. Ormi yoo daldala itti ijaarratu inni qayeef lafa isaa saamamaa, ormi lafa isaatirratti abbaa lafaa ta’aa jira. Hamma dur caalaa itti hammaacha dhufeera gadadoof hacuuccan.
Kanaafuu Oromoo afaan tokko hamma abbaa biyya ofii ta’utti lolli Tophiyaan gaggeessuf jettu kamtuu na hinlaallatu jechuu qaba. Dhaabootiin Oromootis kan ummata hubachiisurratti dirqama guddaa qabu. Seenaa darberraa haabarannu. Seenaa gangalatee dhufe kana ammas dogoggora kalee irra hindeebinu. Biyya Tophiyaatif loluuf dura abbaa biyyaa haataanu. Ilmaan keenya har’as dhumaa nuti immoo maqaa biyya tanaatin hinduunu.
Previous Post: Egypt-Ethiopia tensions escalate over Nile mega-dam project
Next Post: Humans Rights Watch call on Ethiopia’s Nobel peace prize winning dictator Abiy Ahmed to restore internet and phone services in Oromia